एमाले विवाद निरुपण नहुनुमा को दोषी ? (भिडियोसहित) « Yoho Khabar
आश्विन २९, २०७८ शुक्रबार / Fri Oct 15, 2021
एमाले विवाद निरुपण नहुनुमा को दोषी ? (भिडियोसहित)
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका दुई धारबीचको विवाद अन्त्यको प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने सम्भावना बढेको छ । अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी तथा त्यसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि असहज महसुस गरेका ओली नेपाल पक्षको लचकताले थप दबाबमा परेका छन् । तर ओली पक्षले फैसलालाई हारका रुपमा हेर्दा विवाद अन्त्य हुनेमा भने संशय कायमै छ ।
एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षको बढ्दो दबाब र अदालतको फैसला प्रतिकूल सावित हुने देखिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताको लागि आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन् । आफूमाथि बढ्दो चौतर्फी घेराबन्दीको पूर्वाआभास पाईसकेका उनले यसअघि नै सहमतीका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रस्ताबलाई जालझेलको संज्ञा दिएर अस्विकार गरेको नेपाल पक्ष पनि अहिले ओलीप्रति लचक देखिएको छ । एमालेलाई बचाउन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडान कायम राखेर ओली पक्षमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न थालेकोको नेपाल पक्षले दबाबसंगै लचकता अपनाएको देखिन्छ ।
एकताका लागि ओलीलाई दबाब दिने रणनीतिस्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । फलत एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला र चौतर्फी घेराबन्दीले असहज महसुस गरिरहेका ओलीलाई एकताका लागि नैतिक दबाब बढेको छ । जसले एमालेभित्रको विवादमा नयाँ ट्वीष्ट आउने सम्भावना बढेको छ । अर्थात अदालतको फैसला एमाले एकताको मिलनविन्दु बन्ने सक्ने नेपाल पक्षको आशा छ ।
यो बीचमा ओली पक्षले ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावका आधारमा विवाद निरुपण हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन । संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, संसद् विघटनमा ओलीले गरेको कमजोरीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने जस्ता माग नेपाल पक्षको यथावत छ । त्यस्तै एकता प्रस्ताव विरुद्ध बक्तव्यबाजी गरेर विवाद समाधानका लागि नेपाल पक्षले तत्परता नदेखाएको ओली पक्षको गुनासो छ ।
यसरी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेकै बेला नेपाल पक्षले वाग्मती प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीमाथि दबाब बढेको छ । यता ओली पक्ष भने नेपाल पक्षका केहि नेता विवाद अन्त्यका लागि सकारात्मक रहेकोले उनीहरुसंग सहकार्यका लागि लचकतासाथ प्रस्तुत भएको दाबी छ ।
हुन त एकता लागि दोश्रो तहका नेताहरुले गरिरहेका पहलले नेपाल पक्षमाथि पनि दबाब छ । ओलीले पार्टी विधान विपरित गरेका कार्य स्वीकार्य नहुने तर एमाले फुटे नेपाल पक्षमा नजाने नेपाल पक्षकै केहि नेताहरुले अभिव्यक्ती दिईसकेका छन । यो आरोप प्रत्यारोका बीचमा विवाद मिलाउने पछिल्ला दिनहरुमा केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षका औपचारिक–अनौपचारिक बैठकहरु पनि बसिरहेका छन् । तर माधव पक्षले मिलनविन्दुको आशा गरेको अदालतको फैसला विरुद्ध ओली पक्ष भने भ्याकेन्टमा जाने तयारी गर्दा एकताको वातावरण विथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ ।
कोरोनाको त्रासबीच विजयादशमी, टीका घरघरमै सीमित (भिडियोसहित)
सरकारको अनुगमन शुन्य हुँदा बजारमा मनपरी (भिडियोसहित)
विदेशमा रहेका नेपालीको विजयादशमी, परम्परा जोगाउने चिन्ता (भिडियोसहित)
शीर्ष नेताहरूले यसरी मनाए दशैं, प्रधानमन्त्रीले गुरुसँग थापे टीका (भिडियोसहित)
माल्दिभ्समा नेपाली फुटबल टोलीको दशैं टीका
काठमाडौँ – आज विजया दशमी अर्थात टिकाको पहिलो दिन, सबैले आ–आफ्ना ठुलाबढा मान्यजनहरुबाट टिका जमरा सहित आर्शिवाद ग्रहण गरी मनाएका छन । गत वर्ष कोरोना
३२ जनाको ज्यान जानेगरी भएको मुगु बस दुर्घटनाको यस्तो छ कारण
मनोजले गरे दोस्रो विवाह,काल्पनिक समाचार नबनाउन आग्रह
चिनियाँ राजदूत यान्छीले लगाइदिइन् दशैंको टीका
महत्त्वपूर्ण साथी छुटेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दुःख व्यक्त
मुगुको छायाँनाथ बस दुर्घटनामा मत्यु हुनेको सङ्ख्या ३२ पुग्यो